Kugamuchira Vaeni - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kugamuchira Vaeni & Kutandara
Miganhu iri kudzikira sezvo vanhu vazhinji uye vakawanda vari kutsikitsira pasi. Rungave rwendo rwemunhu kana rwendo rwebhizinesi, vatengi vari kutsvaga nyore uye nyaradzo pavanenge vachifamba. Uku kutsvaga kwekunyaradza kunotanga kubva pakubhucha nekusimbisa. Zvinotanga kubva kusarudza chaiko zororo rekuenda, kuronga mafambiro, kugadzira hotera uye kutakura kuchengetedza, nezvimwe Sezvo vanhu vazhinji vari kushandisa Mobile Apps, vanoishandisa zvizere kubhurawuza ruzivo pamusoro pe internet. Nekudaro, inova yakakosha kukosha kune yekugamuchira vaeni uye yekuvaraidza indasitiri kuvaka yakasimba online kuvepo uye kugona kushandira vangangove vatengi uyezve vozokudziridza bhizinesi ravo.
Newgenapps yakashanda zvakanyanya nevashanyi vanopa vaeni uye vanoshanda vekufambisa kuti vavake pfungwa dzichirova nharembozha uye masisitimu ekubhuka. Isu tinopa yakagadzirirwa Enterprise uye yekufambisa masevhisi edu vatengi. Isu zvakare tinopa kune clout mhinduro uye AWS masevhisi.
1.Kuchengetera & Kubhuka kwenzvimbo, spa, gorofu, restaurant etc.
2. Chivimbiso kuburikidza neSMS
3. Nhare Yekupinda
4. Varaidzo masevhisi kuburikidza nenhare
5. Tsvaga ruzivo rwemunharaunda, rwemamiriro ekunze
6.Munhu kushambadzira & kukwidziridzwa
7. Kubhadhara kuburikidza nharembozha